Ukuba ufuna ukuqokelela idatha kwiminyaka yesuntswana, kufuneka siqonde ukuba ukhuphisana ixesha nengqalelo abantu. Eli ixesha nengqalelo ixabiseke kakhulu kuwe; ke izinto ekrwada uphando lwakho. Izazinzulu ezininzi zentlalo, baqhele ukuba umyili uphando ngabantu abathinjiweyo noko, ezifana undergraduates kwi neelebhu ekhampasini. Kwezi zicwangciso, iimfuno Umphandi yokulawula, kwaye nokonwabela nxaxheba asiyonto phambili. Kuphando ubudala yedijithali le nkqubo a oluzinzileyo. Nxaxheba badla elikude emzimbeni ukusuka abaphandi kunye nobudlelwane phakathi ezimbini idla yenzelwe yi computer. Esi sicwangciso sithetha ukuba abaphandi bakhuphisana ingqalelo nxaxheba 'kwaye ngoko ke kufuneka zenze amava nxaxheba bazonwabele ngakumbi. Yiloo nto kwisahluko ngasinye ukuba kwakuquka kunxityelelwana nxaxheba, sabona imizekelo zophononongo wathabatha indlela nxaxheba-iziqu nokuqokelelwa kwedata.
Ngokomzekelo, kwiSahluko 3, sabona indlela Sharad Goel, ubusika Mason, kwaye Duncan Watts (2010) kudale umdlalo obizwa Friendsense ukuba eneneni isakhelo krele ngokujikelezayo uphando sengqondo. KwiSahluko 4, sabona ukuba uyakwazi ukwenza data zero iindleko eziguquguqukayo ngokuyila imifuniselo abantu okunene ofuna kuba, ezifana umculo nokukopisha uphando endiyidalele noPetros Dodds and Duncan Watts (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Okokugqibela, kwiSahluko 5, sabona indlela Galaxy Zoo udale ubunzima intsebenziswano eyakhuthaza abantu abangaphezu kwama-100,000 ukuya inxaxheba ngeenkwenkwezi (kuzo zombini izivamvo ilizwi) umsebenzi umfanekiso zokuphawula (Lintott et al. 2011) . Kwimeko nganye kwezi meko, abaphandi ijolise ekudaleni amava elungileyo nxaxheba, yaye kwimeko nganye, le ndlela nxaxheba lugxile yenziwe iindidi ezintsha zophando.
Ndilindele ukuba kwixa elizayo, abaphandi ziya kuqhubeka ukuphuhlisa iindlela nokuqokelelwa kwedata ukuba sizama ukwenza ngamava omsebenzisi elungileyo. Khumbula, kwisigaba yesuntswana, abathathi zakho ngokucofa kanye kude ividiyo yenja skateboarding.